Robin van Persie oo gaws adeygaya in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda Arsenal – SBC
Robin van Persie oo gaws adeygaya in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda Arsenal
Posted by editor on September 26, 2011 Comments
Xidiga afka hore uga ciyaara kooxda ka dhisan waqooyiga London ee Arsenal isla markaana ka mid ah xulka qaranka Holalnd Robin van Persie ayaa la sheegay in uu ka gaws adeegay oo uu ka caaltaagleynayo heshiis cusub oo uu u saxiixo kooxda Arsenal oo xiligan ku sugan jahwareer iyo guuldarooyinkii ugu xumaa mudo 58 sano ah.
Arsenal oo lumisay xili ciyaareedkan ciyaaryahano muhiim ah oo oo ay ka mid yihiin Cesc Fabregas, Samir Nasri & Gael Clichy waxay ku bilowdey xagaaga ciyaaraha furmay kufaa kac iyadoo lixdii kulan ee ugu horeeyey horyaalka Premier League-ga ka guuleysatey laba kulan oo kaliya.
Robin van Persie oo haatan ah captain-ka Arsenal ka dib bixidii Febregas waxaa heshiiskiisa ka dhiman laba sano isagoo ku eh 2013-ka hase yeeshee dalab ka yimid maamulka kooxda oo lagu doonayey in lagu krodhiyo heshiiskiisa ayuu xaga dambe dhigay isagoo sheegay in aanu kordhin doonin xiligan heshiiskaasi isagoo sheegay in uu waqti qaadanayo.
Maamulka Arsenal waxay ka qabaan wal wal in ay ku dhacdo sidii uu sameeyey Nasri oo diidey in uu heshiis cusub saxiixo iyadoo sidaasi oo kale uu ku kacay daafaca garabka bidix Gael Clichy oo isaguna ku biiray Manchester City oo u muuqanaysa inay ka qaniimaysanayso kooxda weerarku haysto ee Arsenal.
“Wali waxaan haystaa laba sano oo ka dhiman heshiiskeyga, hada oo la joogana waa mid wanaagsan, waana ku faraxsanahay heshiiskeyga, mana ka hadli karo mustaqbvalka, mana ujeedo in xiligan laga hadlo, waayo aad ayeynu u nahay mashquul afartii ama sadexdii maalmood ee kastaba ciyaar ayaan leenahay” ayuu yiri RVP oo ka hadlayey heshiiskiisa Arsenal.
Tababaraha cadaadisku saaran yahay ee Arsene Wenger oo wax laga waydiiyey heshiiska Van Persie wuxuu ka muujiyey wal wal arinkaasi.
“Hadii aad joogto booska Robin aadna aragto Nasir oo baxaya, Fabregas oo baxaya, markaasi ka dib waad walwaleysaa, laakiin hada waxaan filayaa in walwalkaasi uu dhamaadey wanaa hubaa taasi xaqiiqdii” ayuu laabta isagu qaboojiyey Wenger.
Van Persie, 28 oo wuxuu la qaadey Arsenal hal koob oo ah FA Cup waxanaa uu saftey 238 kulan isagoo dhaliyey 100 gool, goolashaasi 71 ka mid ah wuxuu ku dhaliyey lugta bidix, 23 ka mid ah lugta midig, halka lixna uu ku dhaliyey madaxa, sidoo kale 88 goolashiisa ka mid ah wuxuu ku dhaliyey sheeda goosha kuwaasi oo ay ka mid yihiin 12 gool ku laad ama rigoore.
Arsenal waxaa kale oo ay ka qabtaa walwal Andrey Arshavin, Theo Wallcot & Alex Song oo xiligan lafdhabar u ah kooxda kuwaasi oo heshiisyadoodu gabaabsi yihiin.
Culeyska ay saarayaan ciyaartoydan maamulka & tababaraha Arsenal ayaa loo badinayaa in mushaaraadka loo kordhiyo isla markaana dhiig cusub oo ciyaartooy ah kooxda lagu soo kordhiyo bisha January marka ay furanto daaqada kala iibsiga ciyaartoyda, iyadoo waliba ay jirto guux hoose oo ah in loo baahan yahay ciyaartoy magac & awood ku leh kubada cagta oo dib u soo celiya maqaamkii kooxdu ay laheyd oo xiligan dhulka guurguuranaya.